मोबाइल सेट र चामलको आयात ह्वात्तै बढ्यो
साउनमा मोबाइल सेटको आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनका अनुसार, साउनमा मोबाइल सेटको आयात करिब ७७ प्रतिशत बढेर रु. ४ अर्ब २६ करोड मूल्यको आयात भएको देखिएको हो।
मोतीहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट एक वर्षमा ५३ करोड डिजेल आयात
नेपाल आयल निगमले मोतीहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत एक वर्षका अवधिमा करीब ५३ करोड लिटर डिजेल आयात गरेको छ।
सामसङले नेपालमा सार्वजनिक गर्‍यो ग्यालेक्सी नोट-२० का दुईवटा मोडल
सामसङ नेपालले आफ्ना 'फ्ल्यागसिप प्रोडक्ट'हरू ग्यालेक्सी नोट-२० र नोट-२० अल्ट्रा नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले दुवै मोडलका सेटमा काम गर्न र गेम खेल्नको लागि सहज हुने बताएको छ।
एसईई दिएकाहरुलाई एनसेलको विशेष अफर: पाँच जनासँग महीना दिनसम्म निशुल्क कुराकानी एनसेलले २०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएकाहरुलाई विशेष अफर ‘पहिलो सिम’ ल्याएको छ। यो अफर अन्तरगत एसईई दिएकाहरुले रु.१ मै एनसेलको पिप्रेड सिम पाउनेछन्।
पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, नयाँ मूल्य प्रतिलिटर रू. १०७ नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य रु.२ ले बढाएको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले मंगलबार पठाएको सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हेरफेर भएकोले नेपालमा पनि मूल्य बढाइएको छ।
फेरि उकालो लाग्यो सुनको मूल्य पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य पछिल्ला केही दिनयता फेरि वृद्धि हुन थालेको छ। भदौको सुरुआती साता लगातार घटेको सुनको मूल्य पछिल्लो तीन दिनदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।
कोरोना असरः घरभाडा नै तिर्न नसकेर विस्थापित हुने अवस्थामा ठमेलका व्यवसायी पर्यटनमा निर्भर रहेको ठमेल बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प छ। जसका कारण घरभाडा तिर्नसमेत समस्या भएकोले विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
बन्दाबन्दीपछि ठूलो धन विदेशिन रोकियो कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तार रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा विदेशिने ठूलो रकम बचत भएको छ।
घट्यो सुनको मूल्य नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य ह्रास आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, सुनको मूल्यमा प्रतितोला रु. ४०० ले गिरावट आएको छ।
नेपाल आइपुग्यो फ्लिपकार्ट सन् २०१८ मा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी वालमार्टले १६ अर्ब अमेरिकी डलर तिरेर ८१ प्रतिशत शेयर खरिद गरेको भारतीय ई-कमर्श कम्पनी फ्लिपकार्ट स्थानीय सस्तो डिल डटकममार्फत नेपाल भित्रिएको छ।
म्याद नाघेको पानी बेच्ने भाटभटेनीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना भाटभटेनी सुपरमार्केट हनुमानस्थानले म्याद नाघेको बेली ब्राण्डको पानी बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएपछि शुक्रबार (९ साउनमा) उक्त जरिवाना लगाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ ।
शाओमीको ‘मी राउटर ४ सी’ बजारमा शाओमी ग्लोबल टेक्नोलोजीले ४ साउनदेखि मी राउटर ४ सी नेपाली बजारमा ल्याएकाे छ। मी राउटर ४ सी अधिकतम ३०० एमबीपीएस को नेटवर्क गतिसम्म पुग्न सक्ने राउटर भएको शाओमीले जनाएको छ।
जोनी वाकरका ह्विस्की अर्को वर्षदेखि कागजका बोतलमा कागजका बोतल प्लास्टिकमुक्त हुनेछन्। ह्विस्की उत्पादक कम्पनी डियाजियोले प्लाटिकजन्य फोहोर हटाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
बन्दाबन्दीले जुराएको ‘ड्राइभ-थ्रु’, गाडीबाटै अर्डर गाडीमै खाना (भिडिओ रिपोर्ट) कोभिड–१९ रोकथामका लागि ११ चैतदेखि जारी बन्दाबन्दीले खाना तथा खाजाको सेवाका लागि जुराएको नयाँ व्यापार हाे, ड्राइभ -थ्रु। बालुवाटार किचन एक्सप्रेसले सवारी साधनबाट नझरीकन अर्डर अनुसारको खाना ५ मिनेटभित्रै लिने व्यवस्था मिलाएको छ।
एनसेलले शुरु गर्‍यो वायरफ्री प्लस वाइफाइको प्रि–बुकिङ
एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो नयाँ थिम ‘प्लस’ अन्तर्गत वायरफ्री प्लस वाइफाइ सेवाका लागि बुकिङ शुुरु गरेको घोषणा गरेको छ।
दराजले नेपालको अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक र डिजिटल वालेट, ई सेवासँग सहकार्य शुरु गरेको छ।
सामसङ प्लाजाकाे नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक
सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स र होम एप्लाएन्सेसका लागि आधिकारिक वितरक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक गरेको छ।
लक्ष्मी हुण्डाईले ल्यायाे विशेष प्याकेज नेपालका लागि हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.(लक्ष्मी हुण्डाई) ले हाल कोभिड(१९ को परिस्थितिलाई सहज बनाउन भन्दै विशेष प्याकेज ल्याएको छ।
सुनको मूल्य तोलाको ९१ हजार सुनको मूल्य सोमबार फेरि थप रु.६०० ले बढेको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको जानकारी दिएको छ।
बन्दाबन्दीपछि शुक्रबार सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बन्दाबन्दीपछि आज सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ तीन कार्गोसहित नौ र आन्तरिकतर्फ पाँच चार्टर्ड तथा कार्गो उडान भएका विमानस्थलले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य ताेलाकाे करीब रु. ९० हजार बिहीबार सुनकाे मूल्य रु ८९ हजार ६०० कायम भई हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
उडान खुल्ने तय नभए पनि इन्धनको मूल्य घटाएर नयाँ हवाई भाडादर तय हवाई इन्धनको मूल्य घटेकाले आन्तरिक वायुसेवाको पनि भाडादर घट्ने भएको छ । कोभिड –१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि बन्द गरिएको उडान खुला हुने मिति तय नभएको नभए पनि अब हुने हवाई उडानमा भने साविकको तुलनामा हवाई भाडा घट्ने भएको वायुसेवा सञ्चालक संघले जानकारी दिएको छ।
बन्दाबन्दीमा जबरजस्ती पसल नखोल्न आग्रह व्यापारीले बन्दाबन्दी उल्लंघन गरेर बिहीबारदेखि पसल खोल्न थालेपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालले जबरजस्ती पसल नखोल्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तीन वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बिहीबारको बैठकले बन्दाबन्दी अवधिभर जबरजस्ती व्यापार व्यवसाय नखोल्न सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यापारिक क्षेत्र जुर्मुरायो उपत्यकाभित्रका व्यापारिक पसल आजदेखि खोल्न शुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बिहीबारबाट उपत्यकाका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय खोलेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रयास गरेको बताएकाे छ ।
उपभोक्ताको रोजाइमा हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टका उत्पादन, तर दुवै उद्योग घाटामा बजारमा ठूलो माग हुँदाहुँदै सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गएको आर्थिक वर्षमा घाटामा गएका छन्।